Golaha Shacabka: 11 kulan, shan kun oo doolar iyo saddex bil oo fasax ah – Kalfadhi
Waxaa soo baxaya warbixinno hor leh oo muujinaya in Xukuumaddu u qeybisay xildhibaannada Golaha Shacabka ee ku jira fasaxa saddexda bil ah iyo Aqalka Sare lacag dheeraad ka ah gunnooyinka iyo mushaarka sharciga ah. Lacagta oo lagu sheegay inay dhan tahay $1,645,000 [hal miyal lix boqol iyo afartan iyo shan kun oo doolar] ayaa xildhibaannada loo qyebiyay horraanta bisha Soon. Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa xilligaas galay fasax aan dastuuri ahayn.
Ku dhawaad 10 xildhibaan oo la hadlay laanta Af-Soomaaliga ee idaacadda VOA-da ayaa sheegay in xildhibaan walba la siiyay lacag dhan “$5000 oo doolar” oo lagu macneeyay inay tahay in loogu tala galay in xildhibaannadu iskaga bixiyaan arrimaha la xariira soonka. Barnaamijka Galka Baarista ee VOA-da wuxuu baahiyay in lacagtaas ay dheeraad ka tahay gunnooyinka iyo mushaarka sharciga ah ee xildhibaannada labada gole. Inkastoo xildhibaanno tiro yar ay sheegeen in aysan qaadan lacagta, haddana waxaa la rumeysan yahay in aqlabiyadda labada gole ay lagacta guddoomeen.
Xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur
Baarlamaanka Puntland Oo Kala Diray Hay’adda Shaqaalaha Rayidka
Taariikhda Sanatar Ilyaas Cali Xasan